Shandisa Humwe Kuchenjera uye Dzivisa Captcha | Martech Zone
Zvichida chimwe cheakaipisisa mushandisi zviitiko ini chandinoramba ndichimhanyira pawebhu ndizvo CAPTCHA teknolojia.
Captcha ndipo apo chifananidzo chinogadzirwa nenhamba, tsamba, uye dzimwe nguva mazwi tha iwe aunoda kuteedzera kune imwe ndima. Uku ndiko kukanganisa otomatiki fomu mafomu kubva kune ekutaura spammers. Sezvo vasingakwanise kududzira kodhi, havagone kuendesa zvinyorwa zvekunyepedzera.
Iyo tekinoroji yekukanganisa. Ini handikwanise kukuudza kangani ini ndichienda kunopa chirevo kana kutumira meseji pane imwe saiti uye ini ndinokanganiswa neCaptcha munda. Inomisa kuyerera uye inomisa ruzivo rwevashandisi. Handikwanise kumira. Dzimwe nguva, ini ndinongorega uye ndomira kushanyira saiti kana kushandisa chishandiso.
Yakagadzirwa nekombuta. Icho chokwadi chekuti inogadzirwa nekombuta chinondiudza kuti rimwe zuva ichaputswa nekombuta. Ingori nyaya yenguva.
Ndizvozvo simbe. Panzvimbo pekugadzirisa dambudziko, zvinoita kuti mushandisi aite basa akarikomberedza.
Maitiro Ari Nani
Vaviri vanhu vakandibvunza kuti sei ndisina kushandisa Captcha pandakanyora yangu Comment Fomu plugin. Ini handina kuishandisa nekuti ndaida kugadzira izvo chiitiko zviri nani, kwete zvakanyanya, apo uchidzivirira kutaura spammers. Kungori neunyanzvi hwehunyanzvi, makambani esoftware anogona kuita kuti matambudziko aya afadze, kwete kukanganisa.
Mubvunzo wangu wedenha pane wangu kuonana peji iri nyore, "izwi rekupedzisira mune rangu blog zita". Asi zvinoita kuti munhu atarise kumusoro kwechipiri uye pamwe kunyangwe kuseka, kuti ivo vanofanirwa kupinda "blog". Zvakanaka uye zviri nyore. Hapana akaomeswa mavara, akashatiswa, wacky musanganiswa wetsamba nenhamba. Kungori mubvunzo wakapusa usingagone kupindurwa nekombuta - chete muverengi.
Facebook ikozvino ichishandisa Captcha
Iyo yazvino kambani kudonha kubatwa neCaptcha maitiro tekinoroji iri Facebook. Kwete chete iyo yemhedziso yeziso, iwe haugone kuverenga iyo dang chinhu. Facebook yanga iri stellar yakanaka mukugadzira maturu anotonhorera uye kusanganisa mune yavo saiti ... ivo vaifanira kushandisa tekinoroji yakapusa here? Zvakaipa zvakakwana kuti typepad nevamwe zvinotengeswa pairi.
Vamwe vanogona kupokana kuti "zvinoshanda". Izvo zvinongoshanda mukuremekedza kuti zvinobvisa dambudziko kubva pawebhusaiti uye zvoriisa pamushandisi. Uku hakugadzirisike dhizaini uye pane nzira dziri nani! Iri Facebook… tora mukana, gadzira chimwe chinhu! Iva neunyanzvi.
Blog-Kubvarura: technical Itch
Jul 14, 2007 na9: 10 PM
Imwe mhinduro nyowani yakafanana necaptcha ndeye HumanAuth (uye KittenAuth). Izvo zvakafananawo neyako "izwi rekupedzisira mune yangu blog zita" zano. Munhu anofanira kuverenga chinhu uye aratidze kuti vanonzwisisa masemantiki eichi chiratidzo. Hapana komputa inogona kuita izvozvo, zvakadaro. Asi kana iwe ukateerera kune AI vanhu, ivo vachadaro, munguva pfupi! Ingori padyo nekona, chaizvo!
Kana HumanAuth kana chimwe chinhu “chiyero” icho makomputa asingakwanise kubata chikaenda mukushandisa kwakawanda, zvingangoderedza kukanganiswa kwauri kutaura nezvako.
ASI, iwe unofanirwa kungwarira pakuitwa. Muenzaniso weHumanAuth uyo ini ndichangobva kuenda ndokutarisa zvakare une chakakanganisa! Iyo nguva iyo iwe yaunodzvanya kurudyi 3 mifananidzo, iyo inoshandura bhatani kukuzivisa iwe kuti iwe unayo chaiko. Izvo zvakanaka, asi zvinokupa iwe zvisingagone kudzvanya, saka nyore kudzokorora algorithm inogona nyore kuona iyo mitatu mifananidzo.
Pfungwa yako yakapusa uye yakapusa kazhinji inoreva kuti pane zvishoma zvinogona kukanganisika.
Jul 15, 2007 pa 6: 57 AM
Ini ndanga ndisingazive nezveHumanAuth uye KittenAuth… Ndiri kuzotarisa mune aya matekinoroji!
Sep 4, 2007 na9: 33 PM
Izvo hazvikuudze iwe kuti unayo "chaiko" zvinongokuudza iwe kuti iwe une matatu mifananidzo akasarudzwa.
Jul 15, 2007 pa 5: 40 AM
Pfungwa inonakidza, kunyange ini ndisina chokwadi kuti inokodzera iri yega blog chinhu ...
Asi chii icho munhu asingaite kwechinguva chidiki chekutarisa… 😉
Zvisinei, yedu saiti (http://ajaxwidgets.com) haina captcha yeedu blog system. Uye chokwadi ndechekuti 99.99% yeese mablog mablog ari kurambwa neyakareruka chokwadi chekuti hatibvumidze HTML…!
Pamusoro pezvo tiri kushandisa "link kondomu" yeiyo URL shamba iyo inobvisawo yakawanda spam. Kwete chaizvo zvese zvakaoma 🙂
Jul 15, 2007 pa 6: 50 AM
Chinangwa changu chaisave kutarisisa, Thomas. Izvo chaizvo ndezve kuunza kutarisisa kune tekinoroji iyo 'inogamuchirwa' zvakanyanya asi isingashandisi zvine ushamwari.
Muenzaniso wako wemabatiro aunoita nayo ndiyo poindi yangu, pane nzira dzisinganyanyo kubatika dzekugadzirisa dambudziko.
Ndatenda, Thomas! Uye ini ndinoda mawijeti, saka ndichave ndichitarisa yako saiti!
Jul 15, 2007 pa 6: 45 AM
Iwe unotadza kutaura captcha's ayo asiri iwo akaneta uye echokwadi akamonyaniswa zvinyorwa zvemifananidzo zvakavakirwa iwo.
Captcha inogona kunge iri zvinhu zvakawanda, zvinyorwa zvichibva, mubvunzo nemhinduro, kuzviisa pasi (tora cutest mbwanana) uye izvi zvinokurumidza kushandisa uye zvine musoro kuti kuyedza kuona kana iri o kana 0.
Ini ndinobvumirana newe, uye ndinovavengawo, asi posvo yako haina kana kufukidza hupamhi hwakazara wenyaya, uye haina kupa chero mazano nezvekuti ungaigadzirisa sei.
Jul 15, 2007 pa 6: 54 AM
Ini ndinobvuma - ini handina kuuya nemhinduro yakanakisa… ndizvo zvandiri kudaidzira kumakambani ane zviwanikwa zvihombe uye neruzivo rwevashandisi. Kurudziro yangu yekunyora iyo posvo yaive mushure mekuona Facebook ichishandisa tekinoroji iyi.
Ini zvakare handina kuziva kuti Captcha matekinoroji akafukidza kunze kweiyo yakapusa font graphic iyo mushandisi anofanirwa kuendesa. Kana Captcha tekinoroji iri kuwedzera tsoka yavo kuva mibvunzo yekunetsa uye mhinduro dzinogona kuitwa kusimudzira, kwete kudzikisira, ruzivo rwevashandisi, ini ndiri wavo wese!
Jul 15, 2007 pa 7: 25 AM
Shandisa mazita anoshanduka-siyana. Kamwe kana mushandisi asvika kune iyo peji seta musangano cookie iyo ine yakasarudzika nhamba. Wobva wapa yako "yekuisa" tag zita = "chirevo __ [zita]", uye saka imwe yemimwe minda yako.
Wobva waisazve iyo nhamba nguva dzese munhu paanoshanyira peji racho.
Izvi zvichave nechokwadi chekuti munhu wemunhu ari kuenda kune iyo peji: kwechinguva chidiki.
Jul 15, 2007 pa 7: 48 AM
Ini ndinobvumirana zvachose newe. CAPTCHA's marwadzo mu…
Zvisinei, zviri nyore chaizvo kunyora CAPTCHA isingaoneki iyo inonyengera. Kune nzira dzakawanda dzakasiyana dzekuzviita.
Jul 15, 2007 pa 8: 57 AM
Captcha's zvinogona kutsamwisa. Vamwe kupfuura vamwe. Ndakaona zvimwe zvisingakwanisike kuverenga (izvo zvinokunda chinangwa). Ini ndinoshandisa iyo "yakaipa" mhando yeCaptcha yawakatsanangura mune mashoma mapurojekiti. Nekudaro, ini ndinoita kuti zvive nyore zvakakwana kuti uverenge kuitira kuti munhu asiri kufanira kukomberedza huropi hwake kuti huve nemusoro wazvo. Zvakare, ini chete "captcha" kana mushandisi achinyoresa, kwete nguva yega yega pavanopa zvekuisa saiti. Haisi yakakwana system, asi ini ndinozviona zvakaderera pane zvinoshungurudza munhu chinhu.
Ikoko kwaunoenda, isu tinogona kutanga kuyera Captcha's pane yavo "HAF" (Hunhu Kuvhiringidza Chinhu), Spammer Kunetsa Chinhu, nezvimwe.
Jul 15, 2007 pa 9: 13 AM
Captcha vs. HAF. Ndinozvida izvozvo!
Jul 15, 2007 na12: 19 PM
Ini handidi kudzikisira yako plugin asi patova nenzira iri nani yekusefa spam mune izwi rezwi. Iko kune inoshamisa plugin yandinoshandisa inonzi SpamKarma uye inoshandisa ese marudzi eheuristics kuona kana ichi chinyorwa kana chiri chevanhu kana chiri spam. Ndanga ndichirishandisa kweanenge 1 1/2 kana maviri makore izvozvi uye kamwe zvayairatidzira kutaura kwemumwe kunge spam uye kamwe zvanga zvisina chokwadi saka zvakabvunza munhu kuti azadze captcha uyezve chirega chirevo chipfuure. Inobata mazana e spam zvirevo pavhiki kunyange uye isingatenderi chero ipfuure.
Ini ndinovenga captchas futi. Kana ndaifanira kunyora captcha ndaizozviita senge http://www.hotcaptcha.com/ sezvo kutora vanhu vakanaka kana mhuka dzine hura kana izvo zvinobuda mumutsara wemifananidzo hazvina basa kuvanhu uye zvinonetsa zvakanyanya kune zvinyorwa zvinyorwa.
Jul 15, 2007 na12: 28 PM
Ini handishandisi SpamKarma asi ndakazvinzwa. Ini ndinoshandisa Maitiro Akashata uye ini pamwe ndinongofanira kubata ne10% yemashoko spam andakange ndamboita.
Ini ndichaongorora Hot Captcha - inonzwika yakafanana nezvandaida kuona.
Jul 15, 2007 na12: 23 PM
Iyi posvo haina musoro. Mhinduro yako haina kuyera. "Bot" inogona kurongedzwa zviri nyore kupfuudza yako yekuchengetedza chiyero nekuzadza "blog" nguva dzese. Mhinduro ine huwandu hwakaganhurirwa hwemibvunzo - mibvunzo yakawanda sezvaunofarira kunyora. Facebook, mutengesi wetikiti, kana yahoo yaizoita sei mhinduro yakadaro?
Iyi posvo yaingova yekuseka zvakakwana kuti utariswe uye kutyaira yako kushambadzira mari. Iwe uchafanirwa kuedza zvakanyanya ku "tip" iyi blog. Ini ndaizotanga nezvakakodzera kuverenga.
Jul 15, 2007 na12: 34 PM
Wow, Mat. Mumwe munhu anonzwika kugumbuka nhasi.
Zvinonzwika sekunge iwe hauna kunyatsoverenga yangu posvo. Ini handina kumboti mhinduro yangu yaizokwira uye haifanirwe kushandiswa nemakambani aya. Ini akaita taura kuti ndinoda kuona mamwe makambani (akaita seFacebook) achiuya nemhinduro ine hunyanzvi. Yangu plugin inobvumidza iwe kuti uchinje mubvunzo wedenho uye upindure pese paunoda - hapana bot iri kuzotevedzera izvozvo. Parizvino, ini ndanga ndisina SPAM pane yangu yekubatana peji kubva iyi mhinduro.
Mumwe muenzaniso: Pamwe Facebook inogona kunyatso batsirwa nekushandisa kushambadzira pane peji uye nekubvunza "Ndiani shambadziro iri papeji ino?". Chero chinhu chiri nani pane kubaya muboka renhamba uye tsamba - kana uchikwanisa kuzviverenga.
Mufaro! Ive neshuwa kunyorera! hehe
Jul 16, 2007 pa 9: 12 AM
Iyo "Shambadzo iri papeji rino" izano rinonakidza. Ndakazviona zvichishandiswa kare pawebhusaiti inonzi Moola.com. Nekudaro, ivo vanoishandisa chaizvo senzira yekunangisa kutarisisa kune avo vanoshambadzira (seyepakati) pane nzira yekudzivirira spam.
Vamwe vacho vangatokumanikidza kuti utarise vhidhiyo yekushambadzira yechipiri uye wopindura mubvunzo wakadai sekuti: "Iyi kambani yaive yei kambani?" Nepo, ini ndisiri fan yeiyo chaiyo nzira (ini ndinovenga kumirira), zvingave zvinonakidza kuona zvinoita chimwe chinhu chakadai kushambadza mari.
Jul 15, 2007 na4: 30 PM
Kunze kwechinhu chinotsamwisa, icho chihombe, maCAPTCHA anogara asingasviki kune chero munhu ane mashoma pane ekuona zvakakwana.
Fungidzira iyo CAPTCHA iyo iwe yaunowana yakaoma kuverenga uye wobva warega mumwe munhu asina kuona zvakanaka aende. Zvakaoma? Zvinenge zvisingaite.
Zvakadii nezve mumwe munhu asina chiratidzo zvachose, kuongorora iyo webhu neye screen screen kana tekinoroji ye braille. A CAPTCHA yakagadzirirwa zvekuti zvirongwa hazvigone kuverenga. Mune ino kesi, kana akaremara mushandisi.
Kune mashoma anowanikwa maCAPTCHA, ayo anosanganisira izwi reCAPTCHA kune avo vasingakwanise kuona ndiwo muenzaniso, asi zvinowedzerwa zvekushandisa kunetseka zvinoita hunyanzvi hwandisingazombofunga kushandisa. Rova ma spammers neimwe nzira, usaite kuti vashandisi vako chaivo vabhadhare (zvakare chikonzero ini ndoshandisa iyo dofollow plugin).
Jul 15, 2007 na8: 43 PM
Captchas hazvina kushata. Ma Captchas akashata akaipa. Kana iwo akaomarara kuti uone kuti haugone kuverenga, saka izvo zvakashata.
Nekudaro ini ndinofunga mhinduro iri nani mubvunzo wekutanga wemasvomhu, matatu akasiyana:
1. Nhamba 1 (0-9)
2. Nhamba 2 (0-9)
Izvo zvinoitwa saka masvomhu ari nyore kwazvo, uye iwe unogona kuona kuti mhinduro ndeipi kubva pane yekumira script pane nyore.
Jul 16, 2007 pa 9: 13 AM
Imwe mhinduro yakatsiga yandakasangana nayo kumwe kunhu yaive bhokisi rekutarisa rakanyorwa kuti "Ndiri spammer", rakauya risingatariswe nekutadza. Ichokwadi, zvinonyanya kubatsira mune mamiriro ekudzivirira otomatiki kusaina kupfuura pamashoko (sezvo blog blog kazhinji isina mabhokisi ekutarisa anoda kuongororwa).
Ehezve kumagumo ingori nyaya yenguva AI isati yatyora iyo. Asi ini handifunge kuti pane mhinduro yakakwana kupfuura marobhoti asingazombopaza, saka izvi zvakanaka zvakakwana uye hazvivhiringidze ruzivo rwevashandisi zvachose (kunze kwekunge, uchizviona uri spammer…)
Jul 16, 2007 pa 9: 18 AM
Ndezvipi zvine zvisirizvo zvakataurwa nezve ichi kuve chinongedzo kuwana "posvo? Kubva riinhi chinhu chakaipa kuwedzera izwi rako panhaurwa. Heck, ine gumi neshanu zvakataurwa, zviri pachena musoro wenyaya unofarira vanhu.
Kunze kwezvo, kana iri iri nyaya inoita kuti vanhu vatarise, nei heck iwe ungade _not_ kuda kubloga nezvazvo?
Jul 17, 2007 pa 11: 34 AM
Izvo zvisiri sei iyo CAPTCHA?
Chokwadi, haazi mavara akajairwa akaomeswa mumufananidzo wakaomarara, asi icho chinhu chiri kuyedza kutaurira komputa uye vanhu vakaparadzana.
May 20, 2008 pa 10: 55 AM
Ehe, ndinobvuma kuti ma Captchas anotsamwisa zvishoma, uye ndine urombo kuona kuti idambudziko revashandisi vakaremara, asi ini nguva pfupi yadarika
raved nezvekukoshesa kwandinoita hunyambiri hweiyo reCaptcha system, mukuti inovhara spam (kunyangwe isiri 100% zvinobudirira, sekutaura kwako) uku uchibatsira kududzira mabhuku, uye ini ndichiri fan.
Kwete kupokana nenjodzi yavo pane chiitiko chevashandisi, asi iwe unofanirwa kubvuma kuti kushandisa kushoma simba kubva kunhengo yega yega yedziva hombe revanhu kuita izvo kunyangwe iyo komputa yakashinga kwazvo isingagoni (verenga mangled zvinyorwa zvinoshora Optical Character Kuzivikanwa) yakanaka mhinduro.
Kunyangwe ndichiwanzo kutaura, hongu, ini ndese kushandisa zvisikwa panzvimbo yekodhi pazvinogoneka.
Kukadzi 15, 2009 na6: 59 PM
Yakanaka pfupi positi. Ini, zvakare, handibvumirane nemirazvo zvine chekuita nechako chako post. Kunyanya uko vamwe vanonongedzera kushayikwa kwako kwekupa "mhinduro" kana "imwe nzira," yandaigona kunge ndakapika kuti iwe wakaita neyako yekutaura-fomu plugin uye nekukurukura peji rako rekubata (kana kuti ndakarasikirwa nechimwe chinhu? 😉 Ini ndinofunga vanhu vakawandisa fomu maonero (uye ugovagovana) pasina kunetseka kuverenga kunyangwe pfupi pfupi posvo, senge ino, vasati vabuda (izvo zvinoita padhuze nechinhu)
Iyi nharo inonakidza uye, zvisinei kuti mhinduro yakagadziriswa here, yakakodzera kunyora nezve kana iwe uchida. Iri bhurogu yako, mushure mezvose uye - izvi ndizvo zvinonyanya kundinetsa nezve mamwe makomendi - kubvira riini blogging rave iro basa reruzhinji? Kana iwe uchida kunyora nezve chimwe chinhu, nyora nezvazvo. Chero ani zvake asingade kuverenga achiri nesarudzo yekusaverenga. Dai iwe waibhadharisa muripo, iyi ingave iri imwe nyaya, asi, kana ndiri echokwadi, mawebhusagi akaburitswa kubva kuchishuwo chevazhinji chekutumira chero chinhu uye / kana zvese zvinopinda mumusoro mavo vozviisa kunze kuti zvionekwe neruzhinji, kana kuti zvive nyore kugovana neshamwari. Mazhinji mablog 'zviri mukati hazvigoneke paruzhinji kana kutonakidza kune avo vasina kubatanidzwa zvakananga.
Ini ndaitofanira kuseka pandakaverenga nezve kushandisa iyi posvo kuti uwane mari yako yekushambadzira. Zvichida (uye ndinovimba kudaro) ruzivo rwako rwave nani pane rwangu, asi - kunze kwekunge uri kubloga kusimudzira chigadzirwa - unogona kunyora nezve captcha kana iwe unogona kunyora nezve kunhuwirira kwechikafu chembwa uye yako yemamiriro ekushambadzira kuripa pamwero wayo wenguva dzose usingafungidzike mune chero mamiriro ezvinhu 😉
Izvo zvataurwa, kana vagadziri veCAPTCHA vari kuverenga, maita basa nekuwedzera odhiyo! Nharaunda nhema nhema ine tumultuously wavy chena gridhi kumberi uko kune chipoko chena (uye chakakombama zvakanyanya) tsamba dzinotumirwa (dzimwe nguva pamusoro pemucheto wemufananidzo) muenzaniso wakakwana wemamiriro ezvinhu ayo munhu ane chiratidzo chakadzikama anozonetseka kutsanangura, asi chirongwa chingangogadzirise zviri nyore nekufamba kwenguva.
Just my 2 masenti,
Zvido zvakanaka kwauri,